Jilaa Caan Ka Ah Dalka Masar Oo Sabab u Noqday In Shaqada Laga Caydhiyo Duuliye Diyaaradeed. |
Jilaa Caan Ka Ah Dalka Masar Oo Sabab u Noqday In Shaqada Laga Caydhiyo Duuliye Diyaaradeed.
Duuliye diyaaradeed oo u dhashay dalka Masar ayaa laga mamnuucay inuu waligiis dambe diyaarad kaxeeyo ka dib markii uu jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Maxamed Ramadaan u fasaxay inuu la galo qeybta duuliyeyaasha, xilli ay ku jireen duullimaad ku wajahnaa waddanka Sacuudi Carabiya.
Jilaagan sidoo kalena fannaanka ah ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo gacmaha ku haya qalabka laga wado diyaaradda, halka qof kalena uu leeyahay, “Hadda isaga ayaa diyaaradda wada”.
Duuliyihii diyaaraddaas ayaa lagala noqday shatiga, kaasoo aan waligiis dambe dib loo siin doonin, halka kaaliyihii duuliyaha ee diyaaraddaas la socdayna lagu ganaaxay mamnuucis hal sano ah.
Diyaaradda khaaska ahayd ee duullimaadkaas sameyneysay ayaan magaceeda wali la shaacinin.
Wasaaradda duulista hawada ee dalka Masar ayaa bayaan ay soo saartay ku tidhi: “Kadib markii aan xaqiijinnay xadgudub ka dhan ah shuruucda duulista hawada ee Masar, waxaan tallaabo aan shatiga ugala noqonnay ka qaadnay [duuliyaha qeyrul-mas’uulka ah ee howshiisa gabay], sida ay shaacisay warbaahinta Masraawi.
Amniga dhinaca duulista ee Masar waa mid lama taabtaan ah, ayey hadalkeeda sii raacisay wasaaraddu.
Maxamed Ramadaan, oo in ka badan 7 malyan oo ruux ay ku taxan yihiin bartiisa Youtube-ka, ayaa muuqaalkaas soo galiyay 13-kii bishan October, wuxuuna sidoo kale ku sii shaaciyay barihiisa Twitter-ka iyo Instagram-ka.
Isagoo la hadlayay kaamirada muuqaalkaas lagu qaadayay ayuu yidhi: “Waxaan kaxeynayaa diyaarad, waana markii ugu horreysay ee ay arrin noocan oo kale ah dhacdo”.
Muuqaalka ayaa ku dhammaanaya isagoo intuu qeybta diyaaradda laga kaxeeyo galay, ka dib ag fariistay duuliyaha, markaasna gacmaha ku qabtay isteerinka laga kaxeeyo diyaaradda.
Qof aan magaciisa la shaacinin oo aysan kaamirada wajigiisa qabanin, balse codkiisa la maqlayay ayaa markaas yidhi: “Magaca Alle ayaan ku dhaartaye, Maxamed Ramadaan ayaa hadda ah qofka diyaaradda wada”.
Sharciga duulista hawada ee dalka Masar ayaa mamnuucaya in qof rakaab ah uu qeybta duuliyeyaasha ee diyaaradda galo, xilli hawada lagu jiro ama matoorka diyaaradda uu daaran yahay.
Qaar ka mid ah dadkii muuqaalkan ku arkay baraha bulshada ayaa si caro leh uga falceliyay, iyagoo xitaa dadka ku boorriyay inay xayiraad kusoo rogaan atoorahaas.
Ramadaan, oo kasoo muuqday in ka badan 10 filim oo Masaari ah, iyo musalsallo telefishinnada laga soo daayo ayaa la sheegay inuu la safrayay kooxda fanka ee uu ka tirsan yahay, waxayna kusii jeedeen magaalada Riyaad ee caasimadda u ah waddanka Sacuudiga.
Atoorahan 31 jirka ah ayaa sidoo kale caan ka dhex ah waaxda muusikada ee waddankaas, isagoo qaaday heeso si weyn loo jecleystay.
In ka badan 158 malyan oo ruux ayaa mid ka mid ah heesihiisa ku daawaday Youtube-ka.
Inkastoo uu taageerayaal badan leeyahay, haddana Ramadaan ayaa horay ugu lug yeeshay dhacdooyin muran badan dhaliyay.
Sanadkii 2016-kii, waxaa sidoo kale lagu cambaareeyay inuusan ka fikirin duruufaha taageerayaashiisa, oo intooda badan sabool ah, maadaama uu mar walba soo bandhigo sawirro iyo muuqaallo ku saabsan noloshiisa heerka sare ah iyo gawaarida qaaliga ah ee uu soo iibsado.